I-China Rail-mount-Repair Repair Vulcanizing Press ye-Belt ye-Belt mveliso kunye nabenzi | UAntai
Ukulungiswa kweNdawo yoLungiso yoLungiso lweeVenkile zeBelt
Ukulungiswa kweNdawo yoLungiso yoLungiso lweeVenkile zoLungiso lweBelt yokuhambisa, indawo yokuhambisa irabha yokuhambisa kunye nokulungisa umatshini okanye isixhobo, isetyenziselwa ukulungisa icala okanye embindini webhanti lokuhambisa irabha.
Uncedo lwalo matshini kukuba isitya sokufudumeza sihamba ngokushelelayo, esilungele ukulungiswa komonakalo omncinci embindini webhanti yokuhambisa.
Kukho ubungakanani beplaten yokufudumeza yokukhetha, 300x300mm, 200x200mm, njl.
Umthengi unokusixelela nje iimfuno zomsebenzi wabo, ke sinako ukwenza umatshini ngokwezifiso iimfuno zokwenyani zomsebenzi.
Isakhiwo esomeleleyo sealuminium - ayisindi kwaye yomelele;
Uyilo lwesplate sokufudumeza - indawo ekhawulezayo yokulungisa indawo;
Intonga yokujija eziphelweni zozibini -ukuqinisekisa ukusebenza okukhuselekileyo nokuthembekileyo;
I-vulcanizer yebhanti inokuthenjwa, umatshini ongasindi kunye nomatshini ophathwayo, osetyenziswa kakhulu kwicandelo lokunyibilikisa isinyithi, ukumbiwa kwemigodi, izityalo zamandla, amazibuko, izinto zokwakha, isamente, i-coamine, i-chemicaindustry, njl.
I-Filglue kwiindawo ezonakalisiweyo ezifuna ukulungiswa.
Beka isakhelo esisezantsi phantsi kwebhanti kwaye ulungelelanise indawo yokufudumeza engaphezulu enendawo eyonakeleyo.
Beka isakhelo esingaphezulu kwebhanti, emva koko ubeke isitya sokufudumeza esisezantsi ngaphantsi kwendawo eyonakeleyo yebhanti.
Cinezela i-hydraulic lever untiit ifikelela kwinqanaba elaneleyo loxinzelelo.
Qhagamshela intambo ephambili kumthombo wamandla kunye nombane Kwaye emva koko uqhagamshele intambo yesibini kunye ne-controbox kunye neepleyiti eziphezulu nezisezantsi.
Nceda uqaphele ukuba iyahambelana neempawu ezihambelanayo kwi-controbox.
Vula ikhontrakthi kwaye uqalise inkqubo yokulungisa i-vulcanizing.
Phantsi kwemeko yokuqinisekisa iimeko zokusebenza kwisiza kwaye zilandelwe ngokungqongqo iinkqubo zokusebenza, amalunga ebhanti adityaniswe yile ndlela "yokutshisa kushushu" ngokubanzi anokufikelela ngaphezulu kwe-90% yobomi benkonzo yebhanti yomama, eyindlela yokudibanisa amalunga ebhanti kunye namandla aphezulu okubopha okwangoku.
Egqithileyo Ukulungiswa kwe-C-uqinisa ukulungiswa kweVulcanizing yoLungiso lweRubber Belt
Okulandelayo: Ukulungiswa kwe-Edge Vulcanizing Press yoLungiso lweeRubber zokuhambisa iBelt
Icandelo leendaba leCanvas Belt Vulcanization
Imithombo yeendaba yePu Belt Vulcanization
Umatshini wokushicilela we-Pvc Belt
I-Pvg Belt Vulcanization Cinezela
Intambo yentsimbi yeBelt Vulcanization Press